5 Solutions in kaabta aad iPhone Photos.
iPhone waa asaxaabta weyn gaar ahaan marka ay timaado kaydiyo faylasha aad u. Dadka intooda badan waxay isticmaalaan iPhone ay ku kaydiso files music, waraaqaha, videos, iyo wax badan oo kale, alaabtii qabow. Haddii aad tahay nooca in qofka jecel sawiro, ka dibna aad u ogoleyn doonaa in mobiilka iPhone ama waxay noqon kartaa mid aad u wanaagsan qaadista sawirrada iyo ilaalinta albums aad dhawrsan. Marka laga tayada kaydinta iyo soo bandhigga garaafyada iPhone ku siin, wax laga yaabaa dhanaan mar kasta oo aad lumiso kuwa files muhiim ah sawir. Tusaalooyinka qaarkood wanaagsan ee photos mid ka mid ha u malayn laga yaabaa inay waayaan yihiin sawiro arooska, sawiro dhalashadiisa iyo kuwo kale. Hadda, barta waa waxa had iyo jeer waa lagu talinayaa in gurmad sawiro aad iyo aad naftaada jaray qaar ka mid ah waayo-aragnimada aad u adag waa in aan la dhex socday. Bal aynu eegno qaar ka mid ah hababka aad u hufan in ay dib u kor faylasha aad.
Wondershare TunesGo Retro waxaa loogu talagalay in aad si gaar ah ha la wadaagin content files-multimedia ka PC in qalab iyo qeybsanaan, Photo kala iibsiga waxaa lagu gaari karaa si fudud isticmaalayn software madal cross. Software wuxuu kuu ogol yahay jiita iyo hoos u kala iibsiga sawirka halka hubinta heshiis sawir laga sameeyey waa arrin fudud in la isticmaala. Dabcan, waxaad u baahan doontaa in la rakibo qalab software in aad kombiyuutarka. Software waxaa laga heli karaa labada users Mac iyo Windows. Download iyo gashato ka badhanka hoose.
Waxaad u baahan doontaa in ay marka hore lagu xiro qalabka aad isticmaalaya cable USB ah kadibna aan biloowno codsiga lagu rakibay.
Riix ikhtiyaarka Photos on galeeysid ka hadhay homepage. Albums aad sawirka ka muuqan doona iyo waxa aad u baahan doontaa in aad soo dooratay oo guji dhoofinta iyo aad ayaa lagu wadaa in lagu wareejiyo sawirrada si aad u computer.
iCloud waa meel kale laga cabsado in gurmad kuwa sawiro aad runtii maal. Daruurtii ku siinayaa 5GB meel xusuusta laakiin waxaad ka iibsan kartaa dheeraad ah haddii aad u baahan tahay in. Si aad dib sawiro aad la iCloud, waxaad u leedahay in aad dhigay ID Apple ah. Waxaad gali kartaa ilaa 1000 photos in iCloud laakiin had iyo jeer maskaxda ku hay in mar kasta oo aad dhaafo mark this, sawiro aad si toos ah tirtirayaa iyo bedelo kuwo cusub oo aad geliyaan. Ka dib markii la abuuro aqoonsi, u tag Goobta guji iCloud ku xiga click ku Photos . Sahlo button soo socda si iCloud Photo Library si toos ah u geliyaan sawiro aad u iCloud.
Mid ka mid ah hab kale oo aad u weyn in aad sawiro gurmad waa in la isticmaalo Lugood. Lugood waa caan ah oo ka mid ah dadka isticmaala ay ka helaan bulshada inankeeda, laakiin waxa ay si tartiib ah u dhaqaaqo adduunka Windows iyo sidoo. Iyadoo Lugood aad u hagaagsan kartaa iPhone in PC. Just xiriiriyaan iPhone in PC isticmaalaya cable USB ah kadibna aan biloowno codsigaaga Lugood. Tallaabada xigta waa in ay helaan qalab aad ka interface ah oo la helo sawiro si ay u hagaagsan oo iyaga ku saabsan Settings tab. Riix nidaameed button dhinaca midigta hoose ee interface iyo dhamaystirno syncing sawiradaada.
4. iPhoto u Mac
iPhoto waa software ah ordaya on boosteejo Mac waa in si fiican loogu talagalay loo dhoofiyo iyo sixiddiisa sawiro ka iPhone iyo qalabka kale oo badan digital. Mid ka mida weyn oo iPhoto waa in lagu ogaadaa qalabka ugu iyada oo aan wax loo xirxiro darawalka oo dheeraad ah. Si aad u isticmaasho this qalab Mac cajiib ah, waxaad u baahan doontaa si loo soo dajiyo marka hore hubi-dukaanka app, waayo,. Ka dib waa inaad abuurtaan iyo xiriiriyaan iPhone isticmaalaya cable USB ah. Waa in aad qalabka aad ee guddiga bidix ee iPhoto ee interface. Riix Last Import dooro oo dhan sawiradaada. Press Edit markaas nuqul ka dibna tag Finder iyo jaraa'id Edit markaas paste waxyaabaha XX si paste sawiro si aad Mac.
Haddii aad tahay user daaqadaha iyo aad rabto in aad si aad PC wareejiyo sawiro aad ka iPhone ah, ka dibna ay tani tahay app aad u. Codsiga waxaa deigned in ay oggolaadaan in isgaarsiinta deg deg ah ka PC si iPhone. Waxaad u baahan doontaa si loo soo dajiyo app ku saabsan iPhone iyo PC si ay tani u shaqeeyaan. Waxaad labada barnaamijyadooda ka heli kartaa http://www.phototransferapp.com . Ka dib markii la rakibey, xirmaan labada qalabka shabakadaha isku Wi-Fi dibna dib u bilaw app ee iPhone hore. Burcad aad phototransferapp ee daaqadaha.
Haddii xiriir caadi tahay waa in aad awood u aragto iPhone ka PC noqon.
Riix qalab aad iyo awood u xidhiidhka iyo guji qalab aad mar kale sawiro aad ka muuqan interface ka.
Dooro sawirrada aad dooneyso in gurmad aad PC daaqadaha ka dibna heli bar codsiga iyo raadiyaan ah ikhtiyaarka loo magacaabay Download Images . Riix badhanka si ay u soo bixi images kuwa si ​​aad PC.
> Resource > iPhone > 5 Solutions in kaabta aad iPhone Photos